AC Master Card [olujikelezayo ngetyala-kuphela]
トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ AC Master Card [olujikelezayo ngetyala-kuphela]
fixed-rate ajikelezayo nkqubo. iintlawulo Ubuncinane ngetyala esijikelezayo, nto leyo ekhulwini ezintathu imali ekhoyo, inxalenye engaphantsi kwama 1000 yen llirhangqwa 1000 yen. Ngokomzekelo, xa ukusetyenziswa samba 80.000 yen, kuba-3% oko 2400 yen, imali liphantsi intlawulo iza kuba 3000 yen.
ezikhoyo isakhelo lokuthenga ngetyala
ngu 3 million yen kwi imida ephezulu, umsebenzi esisikhupheli sokuxhaphakileyo nayo zidityaniswe, kungaba in ikhadi lamatyala jikelele ukuseta ukuya yen million 5 eklasini kakhulu.
In Product Inkcazelo
ngemali abathengi enkulu ikhadi lamatyala ACOM likhuphe, ungasebenzisa njenge Kurejjitokado eqhelekileyo ekhaya naphesheya zomrhwebi master ikhadi. Yinto efanayo le imini esikhutshwe uviwo kwimizuzu imfutshane 30. Xa ubhalisela i-Internet, ungenza ukunciphisa ixesha elininzi kuthelekiswa umba phezu-the-counter. intlawulo yonyaka likhululekile, nguye lo lwezifundo ingeniso yomntu eneminyaka engama-20 ubudala okanye ngaphezulu uzinzile.
ngenyanga komhla wokuvala leentsuku ezingama-20, kodwa baqhoboshele umyinge wenzala kunye seyibuyisiwe de kwinyanga ezayo iintsuku ezi-6, kwimeko buyiselo ngomhla okanye emva kweentsuku-7, isixa semali limiselwa iintsuku ezisi-7 nganye iintsuku 35 kumele ukuba ukuya ihlawulwe credit esijikelezayo. Ukuba intlawulo esisixa iintsuku ukuya ku-6, iba ngokuzenzekelayo credit ajikelezayo. Ubuncinane mali esiyintlawulo ngexesha zekhadi
olujikelezayo, nto leyo ekhulwini ezintathu imali ekhoyo, inxalenye engaphantsi kwama 1000 yen llirhangqwa 1000 yen. Ngokomzekelo, xa ukusetyenziswa samba 80.000 yen, kuba-3% oko 2400 yen, imali liphantsi intlawulo iza kuba 3000 yen. Umda
kunokwenzeka ikhadi jikelele ngetyala ukuseta ukuya yen million 5 eklasini kakhulu. Ngesiqhelo, xa ucinga ukuba inkoliso Inkcazelo 2 million yen okanye amakhadi ngaphezulu igolide ophezulu kunye neNkulumbuso ikhadi umrhumo wonyaka, njengoko umrhumo ikhadi yonyaka ezamahala, ithi loo nto elula kakhulu.
akhawunti yentlawulo yebhanki indlela Ukongeza ukurhoxiswa oluzenzekelayo, intlawulo lula ukugcina okanye ukutshintshwa, oko kungenziwa kukhethwe intlawulo naluphi ATM of ACOM. Ngokubanzi, ikhadi lebhanki letyala, apho kuya kuba njalo kanye kunye mdla, AC inkosi card kuba ikhadi olujikelezayo ngetyala-kuphela, iya kuthatha ezinye nomdla ngokungqinelana kunye nokusetyenziswa mali lwekhadi.
AC master card for Abahambi, akukho ukubonisa igama lenkampani ACOM. Isilivere ngathi yimbonakalo emhlabeni, ukubonisa kunye Master Card, ezo ezifana umhla wokuphelelwa kunye nobulungu amanani sele kuchaziwe, mna andikwazi amakhadi ACOM Ndikhangele naphi na. Uviwo olunjalo ngumntu ozithukululeyo, akukho mntu ethandwayo okanye kwenziwa onke amakhadi, umntu avareji owayo kwiimviwo card, nayo ingeniso ezinzileyo xa yokuqala, ezifana umntu ebangele ingozi zemali nakuba 1 kukho omnye ethandwa.
nje kuphela Japan njengomseb?nzi ikhadi kwakhona kumazwe angaphandle. Ikhadi ekhutshwe ngokukhawuleza kakhulu, kukuba ingaba kunokwenzeka ukukhupha, uya kubona imizuzwana 3 uxilongo Web. Uviwo ozithukululeyo kancinane, cela kulula na ikhadi likhuphe enoba kukho ulwazi negative ukuba ityala ulwazi.
olujikelezayo ngecredit card, kodwa iya kuhlawula imali leyo kwagqitywa ukuba ahlawule nyanga nganye, njengaxa-mali esisiso ingene esandleni, unga iintlawulo zesisa nabo ngokukhululekileyo. Umfowunelwa ACOM nayo asiyomfuneko. Bonisa kunye Card, ezo ezifana iye yachazwa umhla wokuphelelwa kunye nobulungu amanani, mna andikwazi amakhadi ACOM kwakhona khangela naphi na. Uviwo olunjalo ngumntu ozithukululeyo, akukho mntu ethandwayo okanye kwenziwa onke amakhadi, umntu avareji owayo kwiimviwo card, nayo ingeniso ezinzileyo xa yokuqala, ezifana umntu ebangele ingozi zemali nakuba 1 kukho omnye ethandwa.
olujikelezayo ngecredit card, kodwa iya kuhlawula imali leyo kwagqitywa ukuba ahlawule nyanga nganye, njengaxa-mali esisiso ingene esandleni, unga iintlawulo zesisa nabo ngokukhululekileyo. Umfowunelwa ACOM nayo asiyomfuneko.